Si ay u fahmaan this horumarinta sare qiimeeyo adduunka ballaadhan kombiyuutarada, waxaa loo baahan yahay in la qeexo emulator muddada. Sidaa darteed marka la eego computer, emulator ah waa barnaamij ama hardware in loo maleeyo ama nuqul qalab kale ama barnaamijka kaas oo awood u noo ordi nidaamyada iyo barnaamijyada aan loogu tala galay in la isticmaalo iyaga by. Waxa kale oo muhiim ah in la xusuusto, hardware waa qaali uga faa'ideysan sidaas emulators ugu yihiin software ku salaysan.
Inta lagu guda jiro adduun abid beddelo codsiyada cusub iyo internet, waxa uu noqonayaa mid ay adag tahay in la helo dheelitirka lacag, natiijooyinka la doonayo iyo waqtiga. Oo sidaas ha noqdo dhaqaale si ay u isticmaalaan emulators browser internet-ka si aad u hesho xal badneed. In ka bartamihii 1990 kombiyuutarada ayaa samaysay ilaa xad ah ay awoodaan in ay aqbalaan taranka ee consoles'ka horeyn dhex emulators software. Dhibaatada kaliya ee waa barnaamij kuwanu waxay ahaayeen dhamaystirnayn, ee ah in ay kudayasho nidaam gaar ah oo keliya.
Isagoo sheegay in, waxaa jira dhawr nooc oo ah emulators software oo waxaa loo kala saaraa marka la eego deegaanka oo ay shaqo iyo in la xuso dhowr ah:
Nooca koowaad ee emulator software ah oo ku lug leh socda nidaamyada hawlgalka kala duwan iyada oo jawi dalwaddii. Tusaale ahaan waa emulator xVM VirtualBox Sun Microsystems 'kaas oo awood u nidaamyada hawlgalka loo isticmaali ku dhufto Unix, Mac iyo Windows.
Sidoo kale, waxaa sidoo kale waa nooc ka mid ah si fiican u yaqaan ee dega Khayaadka oo software in kuu ogolaanayaa kulan video sida saldhiga Play, Sega oo kulan Nintendo la ordi in baaritaan kala duwan set PC. An emulator tusaale ahaan iyagoo ZSNES oo awood kulan Super Nintendo la ciyaari mashiinada Unix ama Windows. Mid kale isagoo Virtual Boy emulator Advance oo awood kulan Game Boy Advance la ciyaari kombiyuutarada Macintosh ama Windows.
Emulators Kuwan waxaa badbaadiyey sida Read Memory oo keliya (ROM) files oo ay la jaanqaadaan rasaasta ciyaarta, sawirada disk files ROM load emulators kulan sidaas video ka drive computer ee adag.
In view of this, onlineemulators jira barnaamijyo gundhig ugu websites gaar ah oo awood u kombiyuutarada sidoo kale loo yaqaan ciidankii oo u ciyaaro kulan tusaale ahaan Console. Tani inuu yidhaahdo ciyaaryahan kasta oo ciyaarta via PC ogaado sida emulator ah ka shaqeeya oo u isticmaali.
Ujeedooyinka la caddeeyo, Console kulan waa sanduuqa ciyaaraha ama aalad waa in asal ahaan loogu tala galay inuu u ciyaaro kulan in xiran yihiin telefishan.
Emulators Online soo haan badan faa'iidooyinka:
Mid ka mid ah ayaa si fiican u yaqaan waa marka aad isticmaalayso PC ah waxaad ka ciyaari kartaa ku dhawaad ​​gameonline kasta sii daayay.
Waxaad sidoo kale ay awoodaan in ay u kala bedesho consoles'ka sidaas wax loo baahan yahay in la beddelo inuse hardware wakhtigaas ama xidhmaan mashiinada oo dheeraad ah si set TV.
Mid ka mid ah u isticmaali kartaa oo uu ka soo xusho tiro ka mid ah ilaaliyaal.
Qaar ka mid ah nooca emulators u ogolaanaya isagana ka ciyaari multiplayer internet-ka.
Emulators kale u oggolaadaan in aad badbaadin iyo shuban ciyaarta joogto ah waqti kasta oo lagu daray si degdeg ah weeraryahanka iyada oo qaybaha gaabis ee ciyaarta.
Websites emulator Online
Ka dib markii qaar ka mid ah noocyada kala duwan ee ugu badan ee websites emulator: -
Addicting Games waxay bixisaa noocyo kala duwan oo kulan online lacag la'aan ah oo u kala baxsan kulan Arcade, kulan lagu qoslo, kulan toogtay, kulan hadalka, kulan tartanka iyo qaar badan. Qof diyaar u yahay inuu u ciyaaro iyaga u leeyihiin in ay ka soo xusho qaybaha kala duwan sida xujo & Guddiyada, toogashada, Arcade & Classic, Sports, Action, Strategy, Adventure, Life & kulan Style iyo News.
Waxay bixisaa waayo-aragnimo fiican oo kaa hayo damacsanaayeen in ka tan waxa aad awoodi kartaa in ay soo gudbiyaan kulan la dhammeeyayna ay u isagana la shaqayn jiray in ay leeyihiin kana dayi wax ka mid ah waxa laga filan karo. Xaaladaha qaarkood xaaladaha soo gudbiyey waxaa lagu maalgaliyo lacag caddaan ah.
Goobta Tani waxay u ogolaaneysaa qof inuu ciyaaro kulan Retro haddii kale sheegay in kulan qabanqaabiyey jir. Faa'iidada soocayaa goobta kale waa in emulators ay ku qoran yihiin isticmaalaya Adobe Flash technology si ay u noqon la jaan qaada kombiyuutarada ugu. Qaar ka mid ah kulamada Retro bixiya waa: - Nintendo NES, Wiil midabka ciyaarta, Bilowgii sega, cd sega iyo qaar badan.
Tani waa goobta wayn kulanka caashaqi jiray, waxay bixiyaan in ka badan 500 oo kun oo kulan taasoo lagu soocay galay qaybaha soo socda laga bilaabo kulan tallaabo, ciyaaraha loox, turubka, kulan casino, kulan qoyska, kulan xujo, kulan isboortiga, kulan istaraatijiyad in kulan hadalka . Tan ugu muhiimsan kulan ay ku qoran yihiin Flash sidaas waxaa la ciyaari karaan in ka mid ah web browser jecel.
Gamespot.com waa mid ka mid ah website ciyaarta dhowr online in uu bixiyaa qaababka iyo waayo-aragnimo kala duwan oo u gaar ah. Waxaad awoodaa inuu ciyaaro kulanka ugu dambeeyay ee isjiidka video, videos ciyaarta ciyaarta, dib u eegista video, goodhiyaha ciyaarta iyo more.Some badan oo ka mid ah kulamada ayaa ku jirta kaalinta 10/10 isagoo lagu tilmaamay inay tahay masterpiece ah in ay muhiim u ah khaanadaha ciyaarta ciyaaryahan walba.
Waxa kale oo ay bixisaa forums dood kulamada ugu danbeeyay.
Erayo laguma sharxi karo nooca waayo-aragnimo ka mid kacdaa iyadoo faqri arrin badan waqti ciyaaro, kuwaas oo kulan ay dedijiyaan sidii at freewebarcade.com. Intaa waxaa dheer, bixinta jirin waxaa looga baahan yahay Times ee goobta. Sababta ugu weyn ee ay u taagan yahay republication ee kulan jir ah oo noqday mid guul iyo duubay. Muuqaal kale oo lagu daray waa awooda si loo badbaadiyo kulan iyo dib u bilaabi waqti kasta. Evidence ay user nooca saaxiibtinimo waa awooda in walkthrough macaamiisha ku xayiran in videos in sharax dheeraad ah oo ku saabsan kulan gaar ah la doortay.
Tusaalooyinka kulan bixiyo waxaa ka mid categoriess soo socda: - kulan xujo, ciyaaraha loox, kulan tallaabo ah iyo qaar badan.
Ka dib markii uu dhacay oo isticmaalaya mid ka mid ah goobaha kor ku xusan, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u arkaan iyo sidoo kale mahad ciyaartoyda ciyaarta promisingexperience ku soo dhex noqdo. Tallaabada in aan xoojinno Casharrada caawin doona noo ciyaaro kulamada classic ku qoran.
Si aad u siin sawir ah, waxaan diirada saarayaa kulanka oldie web site:
a) Raadi goobta isticmaalaya link siiyey http://game-oldies.com/
b) bogga internetka A muuqataa muujinaya website ka
c) Waxaad dooran kartaa liiska ciyaar oo raaciyaa ka AZ ama haddii kaleto waxaad si toos ah uga bar raadinta dhinaca midigta sare ee boggan ka baadhaan. Wixii kiiskan aan dooran "Kar-".
d) Dooro icon ku haboon ciyaarta taas oo u muuqata sida natiijooyinka raadinta.
e) Markaasaan idin la gooyo doonaa bogga ah in uu leeyahay badhan bilowga. Guji "bilaabaan".
f) Ka dib riixaya badhanka bilowga, bogga kale soo muuqan doono oo fursadaha ku saabsan sida loo ciyaaro kulankii iyo fallaadho u directions.etc ah
g) Ka dib markii ay hubaal ka dhigaya in wax walba ayaa la filayaa, Korka salool qaar ka mid ah oo dib u fadhiisan. Ku raaxayso!
> Resource > Emulator > Top 5 emulators online - Play kulan classic online